China Polyurea Ganda EVA Foam Yakazadza Donut Fender fekitori uye vanotengesa | Haohang
Polyurea Ganda EVA Foam Yakazadza Donut Fender
Proportional mutoro deflection curve Yakadzika shear mauto Kuzvidzikisira wega kuchinjisa mvura mazinga. Yakadzika yekumisikidza mitengo Kazhinji kugadziridza pasina Mahwanda madhizaini anogona kudzorwa nezvipikiso Kukwidziridzwa kwesimba kunodzivirira kukuvara kune ese ari maviri fender uye akasungirirwa ngarava uye anoita kuti berthing operat
Iyo Donut Fender iri chaiyo mhando ye Foam Fenders. Iyo yakagadzirirwa kungo tsvedza pamusoro peyakamira monopile. Nekuda kwekuvakwa kwayo, iyo fender inoyerera ichikwira nekudzika nematanho emvura anochinja uye kutenderera panosvikira ngarava nekutsvedza pamwe neiyo fender. Iyo Donut Fender yakagadzirirwa ne100% yakavharwa maseru muchinjika-yakabatana polyethylene foam musimboti, yakasimbiswa elastomeric ganda uye yakaderera kupesana mapedhi mukati memukati simbi simbi.
Donut Fenders anowanikwa mumadhimoni kubva ku1,270 mm kusvika ku4,220 mm uye huwandu hwakawanda hwemurwi we610 mm kusvika ku2,388 mm. Pamusoro pezvo, korona dzekumhara, zvipikiso zvinopesana (zvekushandisa pasi pegungwa) kana zvimwe zvinhu zvakaita sekuchengetedza nettings zvinogona kuwedzerwa.
Iko kuomarara kwekupupa, kukura kweganda, murwi / fender dhayamita uye zvakare kukwirira kweiyo fender kunogona kuchinjwa pakukumbira. ShibataFenderTeam ingafarire kugamuchira yako dhizaini dhizaini iyo inotibvumidza isu kugadzira mhando chaiyo, saizi uye huwandu hwese dhizaini yeDonut Fender.
Proportional mutoro deflection munyonga
Low shear mauto
Kuzvigadzirisa pachako pakuchinja huwandu hwemvura
Yakadzika yekuisa mitengo
Kazhinji kugadzirisa kusununguka
Zvinyorwa zvega zvega zvinogona kudzorwa nezvipikiso
Kukwidziridzwa kwesimba kunodzivirira kukuvara kune ese ari maviri fender uye akasungwa ngarava uye zvinoita kuti mashandiro eberthing ave nyore uye akachengeteka.
Kurumidza uye nyore kuisa
Yakagadzirwa kubva kune yakasimba uye yakavimbika zvinhu kudzikisira mutengo wekuchengetedza uye kuwedzera mashandiro uye hupenyu hwese hweiyo fender
Iri pazasi curve rinoratidza iyo Energy Absorption yeiyo inofungidzirwa HAOHANG Donut Fender pasi peakasiyana% eCompression. Rutivi rumwe chete rweFender rwuri kushanda panguva yekumanikidza uye kwete hwaro hwayo hwese. Maitiro anowanzo kupihwa kumanikidza kwe60% zvisinei kudzvanyirira kwepamusoro panombotenderwa panguva pfupi yenguva apo tsaona dzinoitika.
Kutsauka uye kukwira kupfuura makumi manomwe neshanu muzana (75%) kana kukaiswa pamusoro pemaawa kuchaderedza kugona kwefuro kudzoreredza chimiro charo chepakutanga. Izvo zvicharamba zvakadaro zvichichengetedza basa rayo rekuchengetedza. Ndokumbira utarise kuti pakudzvanyirira kwakanyanya pane njodzi yekukuvadza zvemukati simbi zvikamu zveDonut Fender.
"Reaction Force" Curve inoratidza masimba akagadzira ese ari maviri eVessel hulls uye iyo Steel Monopile panguva yekumanikidza kweDonut Fender.
Kuvhara yekupinda / yekubuda kona vanokona
Yakagadzirirwa kuchengetedza masuo eHarbor semadhoketi, kukiya kana seyambiro kune ngarava dzinotsauka kubva munzira dzadzo.
Dhizaini dhizaini iyo inounza yakapfava kunzwa kana pamberi pekukanganisa
Longitudinal gwara rekutwasanudza Chikepe munzira yayo ichidzivirira zvakakomba kukuvadza kune hull uye jetty / Quay madziro.
Masayizi uye Maumbirwo akaverengerwa kutarisisa hunhu hweMudziyo uku uchidzikisa hupamhi hwefender kusvika padiki.
Maitiro akati wandei ekugadzirisa aripo: Semuenzaniso, iyo Fender inogona kunamirwa pahwendefa yesimbi, yakasungwa pane jetty / Quai madziro; inobatwa newaya kana ngetani uye / kana kusungwa.
Kunyorera KwaDonut Fender
Kuvhara uye masuo akaomarara echiteshi, kuchengetedzwa kwekona, kutendeuka kwema dolphin, nzvimbo dzine kusiana kukuru kwemafashama kana kudzivirira zambuko
Zvimwe zvivakwa zvekupokana
Ngarava dzepasi pegungwa
Q1. Ndezvipi mazwi ako ekurongedza?
A: Kazhinji, isu tinorongedza zvinhu zvedu mukati mezvakatipoteredza mapurasitiki mabhegi uye ekunze makatoni. Kana iwe wakanyoreswa zviri pamutemo patent,
tinogona kurongedza zvinhu mumabhokisi ako akapiswa mushure mekuwana tsamba dzako dzekubvumirwa.
A: kazhinji kana odha mari isingasviki $ 1 000, inoda kubhadhara mari yakazara usati waburitsa, kana iri inodarika $ 1 000, inoda iyo T / T 30% sedipoziti, uye 70% pamberi pekusununguka. Tichakuratidzira iwo mafoto ezve zvigadzirwa uye mapakeji, anokwana kuchengetedza zvigadzirwa zvako qulity, great thanks! usati wabhadhara mari yacho.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU… .etc, main maererano nezvinodiwa nevatengi, ndatenda!
A: Kazhinji, zvinotora mazuva gumi kusvika makumi maviri mushure mekugamuchira yako yekumberi kubhadhara. Iyo chaiyo yekuendesa nguva inoenderana pane zvinhu uye huwandu hweodha yako.
Q5. Unogona kubereka maererano ivhu?
A: Ehe, isu tinogona kuburitsa nema sampuli ako kana emagetsi madhirowa. Tinogona kuvaka kuumbwa uye zvigadzirwa.
A: Tinogona kupa yemahara sampuli kana isu takagadzirira zvikamu mudura, asi vatengi vanofanirwa kubhadhara yekutakura cost.great thanks nekunzwisisa kwako.
A: Ehe, isu tine 100% bvunzo usati wasununguka, chengeta iyo quallity, usanetseka!
A: 1. Isu tinochengeta mhando yakanaka uye yemakwikwi mutengo kuona kuti vatengi vedu vanobatsirwa;
2. Tinoremekedza mutengi wese seshamwari yedu uye nemwoyo wese tinoita bhizinesi uye tinoita hushamwari navo zvisinei nekwavanobva.
Pashure: Imba Bhoti Pontoon Kupisa Kutengesa Dock Fender Chikepe Mhepo Yekudzivirira
Zvadaro: Yakakwira Kuomesa Arch Type A Rudzi V Rudzi W Rudzi M Rudzi Rubber Fender Strip
Mhepo dzeMahombekombe, Ship Mhepo Bhegi, China Rubber Fender, Tec Zvikepe, Wakaumbwa Block, Rubber Fender,